Indlu yaseLatvia, yesimanje futhi enethezekile eSigulda - I-Airbnb
Indlu yaseLatvia, yesimanje futhi enethezekile eSigulda
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Raivis
U-Raivis Ungumbungazi ovelele
Izivakashi zinikezwa ingxenye ehlukile yendlu yangasese enomnyango ohlukile wegceke kanye nendlu. Indawo yokuhlala yesimanje yaseLatvia ifakwe ifenisha eyingqayizivele eklanywe abaklami baseLatvia futhi yenziwa eLatvia. Isistimu yokushisa komoya ephezulu kanye nokupholisa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka kuzokuvumela ukuthi ujabulele ukunethezeka okuphelele ngokwezifiso zomuntu ngamunye.
45 square metres. Kukhona ikhishi eline-hob kagesi, ifriji nomshini wokugeza izitsha, i-TV enkulu yesikrini esiyisicaba esinamashaneli amaningi e-TV kanye neqoqo lefilimu ye-Netflix, ukufinyelela okuhle kwe-inthanethi ye-Wi-Fi, ikhona lokufunda elinethezekile lokufunda izincwadi noma izingxoxo ezimnandi. Igumbi lokugezela lineshawa evulekile yokuhamba ngezinyawo kanye nebhavu eliphumulele.
Le ndawo itholakala endaweni yokuhlala enhle nethule nje uhambo olude ukusuka e-Sigulda Trails, Paradise Hill, Satezele Castle Mound, Sigulda Castle Complex, Kraukļi Gorge, Peter's Cave nezinye izinto eziningi ezibalulekile.
Ngokuhlelwa kwangaphambili kanye nemali eyengeziwe, kungenzeka ukusebenzisa ubhavu oshisayo engadini evulekile, ukuqasha amabhayisikili, singanikeza nezinsizakalo zokuthutha.
URaivis Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Sigulda namaphethelo